आज तोलामा ३ सयले घटेर ९४ हजार ३ सयमा आएको भएपनि यो नेपालीको क्रयशक्ति भन्दा निकै बाहिर हो ।
बुधबार, मंसिर ८, २०७८ ३:१७
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। आज तोलामा ३ सयले घटेर ९४ हजार ३ सयमा आएको भएपनि यो नेपालीको क्रयशक्ति भन्दा निकै बाहिर हो । सुनचाँदी व्यवसायीहरु नै सुनको भाउ उकालो लाग्नु नेपालीका लागि सुःखद नभएको बताउँछन् ।
सुनको भाउ बढ्नुका पछाडी अन्तराष्ट्रिय व्यापार नै मुख्य कारण हुने गर्दछ । सनचाँदीको भाउमा आउने उतारचढावमा नेपालको भूमीका हुँदैन ।
के के हुन् कारण ? पछिल्लो समय सुनको भाउ बढ्नुको मुख्य कारक अमेरिका हो । अमेरिकामा ३१ वर्ष यताकै अत्याधिक महँगी बढेको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब १५ ट्रिलियन डलर छापेको र यसका कारण महँगी बढेको अनुमान अन्तराष्ट्रिय बजारमा हुँदै आएको छ ।
‘जति डलर प्रिन्ट गरेपनि बरोजगारी त बढि नै रह्यो’ सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियश शाक्य भन्छन्, ‘बेरोजगारी बढेपछि गरिबी बढेको छ, अमेरिकामा गरिबी बढ्दाको असर विश्व बजारमा पर्ने नै भयो, किनकी अन्तराष्ट्रिय व्यापार त डलरमा हुन्छ ।’
त्यस्तै बिट क्वाइनको भाउ अत्याधिक बढेकाले पनि डलर कमजोर भएको छ । बिट क्वाइनले डलर कमजोर पारेकाले पनि यसको असर सुनचाँदीको देखिएको छ ।
त्यस्तै केही दिनअघि सम्पन्न भएको ‘कोप २६’ मा चीन र रसियाका राष्ट्रपतिले भाग नलिएको कारण पनि अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा दरार उत्पन्न भएको छ । जसका कारण मानिसहरु अन्य लगानीका क्षेत्र छोडेर सुन किनेर राख्ने मनस्थितीमा पुगेको र बजारमा सुनको माग ह्वात्तै बढेको छ । यसले पनि भाउ बढाउन भूमीका खेलेको नेपाली व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
कति पुग्ला भाउ ?
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियश शाक्य सुनको भाउ अन्तराष्ट्रिय बजारमा तीव्र रुपमा बढिरहेको बताउँछन् ।
हाल १८६० डलर प्रति औँस रहेको सुनको भाउ नेपाली बजारमा ९४ हजारको पेरिफेरीमा छ । यही क्रम जारी रहे सुनको भाउ १ देखि २ हप्तामै ९६ हजार कट्ने शाक्यको भनाई छ । यदि अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा शक्ति राष्ट्रबीच टकराव कायम रहे सुनको भाउ नेपाली औसतको क्रय क्षमताभन्दा निकै बाहिर पुग्ने देखिएको छ ।
हाल नेपालमा दैनिक २० किलो सुन आयात भईरहेको छ । तर, बिबाहको लगन भएको मंसिर महिना सुरु हुन लागेकाले दैनिक ४० किलो सुनको माग भईरहेको छ ।